WordPress na WPO: otu esi emeziwanye ọsọ nke ecommerce gị | Ozi ECommerce
ECommerce ozi ọma | | CMS na Teknụzụ, SEO
Otu n'ime ihe na -ekpebi ọnọdụ SEO bụ loading ọsọ nke weebụsaịtị. Mgbe anyị na -arụ ọrụ na WordPress, usoro WPO bụ isi ihe iji bulie akụkụ a.
Ya mere, ọ dị mkpa ịmara ma lekọta ihe a site na mmalite mmepe ya. N'isiokwu a anyị ga -akọwa otu esi eme ya na ihe uru nke mmekọrịta a n'etiti WordPress na WPO.
1 Ntinye ngwa ngwa na WordPress
2 Kedu ihe bụ WPO
3 WPO na WordPress
3.1 Otu esi etinye ezigbo WPO na WordPress
Ntinye ngwa ngwa na WordPress
Imirikiti webụsaịtị emepụtara ugbu a bụ nke ejiri WordPress rụọ, nke akpọkwara aha WP ya. Usoro njikwa ọdịnaya a ma ọ bụ CMS na -enye gị ohere ịzụlite ụdị saịtị niile, site na ihe ngosi dị mfe ruo ecommerce dị mgbagwoju anya, n'ụzọ ngwa ngwa, mfe, vasatail na echekwa.
Iji mee nke a, ọ na -eji ndebiri ahaziri nke enwere ike ịhazi ya, ebe plugins ma ọ bụ microprogram iji tinye ọrụ ndị ọzọ na mmezu ya.
Na mbụ, ndebiri ejiri mee nwere atụmatụ achọrọ maka ịrụ ọrụ nke ọma: ha bụ anabata, nwere ọkwa nchekwa ziri ezi, nwee omume enyi maka igwe ọchụchọ ma nye gị ohere itinye ọdịnaya dị omimi na static ngwa ngwa.
Ọsọ ịgba ya dịkwa mma, mana n'ọnọdụ ọ bụla enwere ike imeziwanye ya, na ọtụtụ, site na itinye ihe akpọrọ WPO. Anyị ga -abanye n'ime isi ihe a na ọsọ nke ịbanye na weebụsaịtị kachasị mma n'okpuru.
Kedu ihe bụ WPO
Mkpuchi okwu ndị a kwekọrọ n'okwu n'asụsụ Bekee Njikere Ịrụ Ọrụ Weebụ ma ọ bụ, n'asụsụ Spanish, njikarịcha arụmọrụ weebụsaịtị. Ọrụ ya doro anya: iji bulie arụmọrụ nke saịtị ahụ ka ọ nwee ike ibubata n'oge kacha nso enwere ike.
Ọ bụ eziokwu pụtara ìhè, na anyị agaghị eleghara ya anya, Ndị ọrụ ịntanetị anaghị eche ihe karịrị sekọnd 3 ma ọ bụ 4 iji nweta weebụsaịtị ma ọ bụ ecommerce. Tupu oge ahụ agaa, ha na -achọ ebe ọzọ wee gbahapụ mbọ mbụ ha. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, enweghị ike ibubata ngwa ngwa na -eduga na mfu nke ndị ahịa ma ọ bụ ndị na -eso ụzọ nwere ike ịlaghachi.
Ọzọkwa, ezughị naanị iburu ibu ahụ home ngwa ngwa: a ga -agbarịrị saịtị ndị ọzọ ọfụma, na -enweghị ichere na -enweghị isi ma ọ bụ ogologo oge wee hụ na ahụmịhe onye ọrụ dị mma maka onye ọrụ ịntanetị ọ bụla.
Akụkụ ọzọ na -ekpebi ihe bụ nke ahụ Google lere okwu a anya dị ka akụkụ dị mkpa na ọnọdụ ebumpụta ụwa ya. Ogologo oge ibe anyị na -ewe iji buo ibu, ohere na -adịchaghị enwe ike itinye ya na ngwa ọchụchọ.
WPO na WordPress
N'oge a, anyị niile malitere ịmatakwu nke ọma ịdị mkpa nke WPO mgbe ị na -azụlite ecommerce. Ọrụ okike na WordPress abụghị otu: ee ma ọ bụ ee, ọ dị mkpa ịkwalite arụmọrụ weebụ n'oge usoro a.
Isi ihe bụ naanị ndị otu ma ọ bụ ndị ọkachamara na -emepe emepe na / ma ọ bụ idobe weebụ. Iji ndị ọkachamara a dị mkpa ịmụba visibiliti, okporo ụzọ, ntụgharị na nloghachi nke weebụsaịtị anyị. N'ezie, ịmepụta ecommerce na WordPress bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla, ọ dịghịdị mkpa inwe ihe ọmụma gara aga banyere okike weebụ. Ma eleghị anya, Enwere nnukwu ọdịiche dị n'etiti ibipụta weebụsaịtị dị mma yana inwe ecommerce na -emeri n'ọma ahịa kachasị asọmpi.
Nke ahụ bụ ihe ọ bụ n'ezie. Iji nụ ụtọ ngwa ọrụ marketing arụ ọrụ, rụọ ọrụ nke ọma ma nwee ike ịbịaru nso na ebumnuche anyị.
Otu esi etinye ezigbo WPO na WordPress
N'ezie, ọrụ ịkwalite arụmọrụ nke ecommerce mere na WordPress dị mgbagwoju anya karịa itinye usoro nke plugins kpebisiri ike. Ha bụ ezigbo enyemaka, mana ọ dị mkpa nwee ihe ọmụma na ahụmịhe zuru oke iji nwee ike ịkpa oke nke dabara, jikọta ha, mezie ha ma mezie ihe dị mkpa na nke a.
Ya mere, na -enweghị mgbagha, anyị ga -atụkwasị obi ndị nweere onwe ha pụrụ iche na idobe weebụ, ndị tozuru oke ma nwee ike ịrụ ọrụ a nke ọma.
Dịka ntuziaka, iji gosipụta ọkwa dị mgbagwoju anya yana ọnụọgụ mkpebi teknụzụ dị mkpa ka eme na nke a, anyị depụtara n'okpuru. kedu akụrụngwa na -enye ohere iji mee ka ọnụego nbudata nke ecommerce WP ọ bụla:
Kwalite foto ndị etinyere. Ilele na ịntanetị anaghị achọ foto nke mkpebi pụrụ iche na oke ibu. Agbanyeghị, anyị na -ejikarị ụdị ndị a arụ ọrụ imewe nke, n'ezie, nwere ogo dị elu. Site na itinye ha na WordPress anyị, anyị na -ebubata oke mkpokọta saịtị ahụ n'ụzọ na -enweghị isi, ezigbo nkwarụ nke na -ebelata ọsọ ịgba ya.
Mejuputa ngwa ngwa nke itinye ọdịnaya: LazyLoad bụ usoro na -enye ohere yigharị ọdịdị na ibudata ọdịnaya ụfọdụ ruo mgbe onye ọrụ ga -elele ya. Mgbe ha si na mpaghara a na -ahụ anya, ma ọ bụ mgbe ha na -amalite igodo, anaghị ebu ha. Nke a na -ebelata oge ngosi nke ihuenyo ọ bụla. Onye ọrụ ahụ na -ahụ ya nke ukwuu.
Bulie cache: Maka nke a enwere ihe dị iche plugins na -akwado ọsọ nke saịtị ahụ na mmelite nke WPO. Usoro a gụnyere akụkụ teknụzụ dị ka ịgbanye HTML, na -enyere nghọta aka, ịchekwa bandwit na nnyefe, wdg. Ndị freelancers Ndị ọkachamara maara nke ọma ihe anyị na -ekwu.
Wepụ akụ static: Ọ bụ ajụjụ ọzọ dị ka Chinese ka neophytes. Ọ na -emetụta CSS, JS ma ọ bụ ọbụlagodi faịlụ HTML ma na -eme ka ha were obere oghere ma yabụ were obere oge buru ibu.
Nweta na ọtụtụ ọba akwụkwọ na akụrụngwa ndị ọzọ.
Nkwekọrịta nnabata mma.
Anyị nwere ike ịga n'ihu na -ekwu maka ime ka nchekwa data anyị dị ọcha yana n'ọnọdụ zuru oke, kwalite koodu, jiri CDN na ihe ngosi ndị ọzọ yiri ya.
Mana ọ dịghị mkpa: mkpebi kacha mma bụ ịkpọ onye ọkachamara ruru eru nke ahụ nwere ike iji ohere zuru oke nke weebụsaịtị anyị. N'ụzọ dị otú a, ọ ga -abụ ịsọ asọmpi, azụmahịa na uru. Anyị agaghị echefu na ọ bụ ngwá ọrụ maka marketing ihe dị mkpa n'ọtụtụ atụmatụ ika.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » WordPress na WPO: otu esi emeziwanye ọsọ nke ecommerce gị